फेरि अर्को प्रेमकथा ~ The Nepal Romania
फेरि अर्को प्रेमकथा
प्रेममा जति साहित्य वा फिल्म सायदै अन्य विषयमा लेखे/बनेका होलान् । तर पनि प्रेम रहस्यमयी नै छ । प्रेमका विभिन्न आयाममा अझै पनि बहस जारी छ । यसै मेसोमा शुक्रबारदेखि रिलिज हुन लागेको फिल्म 'तिम्रो मायामा'ले पनि 'विद्यार्थी जीवनमा प्रेम गर्नु ठीक हो वा होइन' भनी देखाउन थालेको छ । राजेश विश्वकर्माको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्ममा कलेजमा पढ्दै गरेका विवेक (उत्तम प्रधान) र पुनम (उषा पौडेल) तथा गोपाल (दिवस बस्नेत) र अनिता (स्मृति स्वर्णकार) बीचको मित्रता विभिन्न परिस्थितिले गर्दा घनिष्ठ प्रेममा बदलिन्छ । गोपाल र अनिता दुवै अनाथ भएकोले जसरी एक-अर्काको सहारा तत्काल स्वीकार्छन् र प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्छन् । विवेक र पुनमको परिस्थिति केही भिन्न छ । पुनम डाक्टर बन्ने अभिलाषा बोकेर गाउँदेखि सहरमा पढ्न आएकी हुन्छे भने सानैमा बाबुआमा गुमाएको विवेक पनि सोही कलेजमा पढिरहेको हुन्छ । पढाईमा दत्तचित्त पुनम प्रेमसम्बन्धलाई त्यति महत्त्व दिन्न किनकि ऊ सोच्छे, 'पढेर केही गर्नु छ, केही बन्नु छ ।'
तर उसको कोमल मनलाई चाँडै नै विवेकले साथीको सहयोगमा पगाल्न सफल हुन्छ र अन्तिम पलसम्मको साथको वचन पाउँछ । तर उनीहरूको सम्बन्धमा तब विचलन आउँछ जब बाबुआमाले पुनमको बिहेका लागि छुट्टै केटोलाई चुन्छन् । उनीहरूका लागि क्यानडामा बस्ने इन्जिनियर केटोका अगाडि अनाथ, गरिब र जागिर नभएको विवेक तुच्छ ठहरिन्छ । आखिर अभिभावक र छोरीबीचको वैचारिक द्वन्द्वले नै फिल्मलाई चरमोत्कर्षमा पुर्‍याउँछ ।
उता अभिभावकको करकापमा जनैसुपारी गरिसकेको केटोले पनि अन्ततः आफ्नै प्रेमिकालाई विवाह गरेको खबर पुनमका बाबुआमाले पाएपछि भने कथाले नयाँ मोड लिन्छ । त्यसपछि पश्चतापमा परेका बाबुआमाले छोरीले नै रोजेको केटासँग बिहेका लागि सहमति नआउँदा ढिलो भइसकेको हुन्छ । सुदीक्षा चलचित्र निर्माण कम्पनीको ब्यानरमा केही वर्षअघि नै सुरु गरेर बीचमा रोकिएको फिल्म 'तिम्रो मायामा' ले उठाएको विषय फिल्म ढिलो गरी रिलिज भए पनि पुरानो लाग्दैन, जति यसको प्राविधिक पक्षमा टड्कारो खडकन्छ । पुरानो प्रविधिमा खिचिएकाले फिल्मको दृश्य समय सुहाउँदो लाग्दैन भने ध्वनि पनि स्पष्ट सुनिँदैन । फिल्म प्राविधिक रूपमा पछि परे पनि कथावस्तु र प्रस्तुतिले भने फिल्मलाई केही हदसम्म पुरानो हुनबाट रोकेका छन् । मुख्यतः दुई पात्र विवेक र पुनममा नै घुमेको फिल्मको पटकथा खास उल्लेख्य छैन । कथा र त्यसमा पात्रले गरेका अभिनयले दर्शकलाई भावनामा डुबाउन सफल देखिएको छ । कुमार/कुमारको द्वन्द्वनिर्देशनमा नयाँ प्रयोग केही छैन भने गीत/संगीत उति सारो श्रुतिकर लाग्दैन र कथाअनुरूप पनि बगेको देखिँदैन ।
तर फिल्ममा पात्रले गर्ने संवाद र तिनका विचार ओजिलन्छन् । फिल्मले प्रेम गर्दैमा भागेरै बिहे गर्नुपर्ने परिपाटीको विरोधी मुख्य पात्रहरू अभिभावककै सहमति खोज्ने प्रयासमा भोगेको पीडालाई एकातिर देखाएको छ भने प्रेमलगत्तै आफ्नै निर्णयमा विवाह गरेपछि सुखी बनेको अर्को जोडीको पटकथाले फिल्मको आशय झल्काएको छ । कथामा खासै नौलो केही नलागे पनि यसको प्रस्तुतिले भावनात्मक स्वभावका दर्शकका लागि फिल्म राम्रै लाग्न सक्छ । तरँनयाँ प्रविधिमा फरक धारका फिल्म आइरहेको बजारमा फिल्म 'तिम्रो मायामा' को प्रतिस्पर्धा भने कठिन हुन सक्छ ।
रेखाले खोलिन फेसबुक आईडी
रेजिनालाई एक पछि अर्को अफर
सुन्धारामा खुल्यो मल्टिप्लेक्स हल
राजधानीमा स्पेनिस चलचित्र महोत्सव
एस् फेमिली ऋचा
१६ लाखमा साइन !
कमब्याकमा काली नम्रता !
खुल्यो ऋचाको रहस्य
'अत्तो न पत्तो'को बक्स अफिस
सुष्मा थलिएपछि रेजिना !
दुब्लाउन बाध्य हिरो
अरूणिमालाई अचम्मको नशा
देखाउन पाईनन् रेखाले
फाइट डाइरेक्टरकी छोरी…
भूल भए माफ गर
कलिउडमा हलिउड निर्देशक
सेन्सर प्रक्रिया खारेजीको माग
मिस यू को छायांकन समाप्त
नारायणी नदीले बुझेन राजलाई
कलिउडमा महङ्गो लडाइ
हिमाल बचाउन हिरोइन
भागेर काठमाण्डौ फर्कदैछिन् रेखा
असोज २२ गते 'झाक्री'को पालो
फनपार्कमा खोलिदैछ रक्सी भट्टी
विदेशमा नेपाली फिल्म
त्यो १० मिनेट दिपेन्द्रलाई १० घण्टा जस्तै
राजेश हमाल र 'गुरूदक्षिणा'
असोज ८ गते भूल भए माफ गर
उद्धव पुनः सम्मानित
निशाको छोटो ब्रेक !
म्युजिक रिभ्यू : भूल भए माफ गर
ऋषिका दर्जन कमेडियन !
'पलपलमा' जबर्जस्त ओपनिङ
नम्रता चढेको डुङ्गा पल्टियो
'स्वर'मा कपि भेटिए पुरस्कार
पूजना अब निर्मात्री
अब अर्को 'कसम'
सेक्सी नायिका र कोठी
हृयाप्पी बर्थडे दिलीप
सोल्टीमा रेशको जल्वा !
'तिम्रो माया' प्रीमियर
विहे गर्न दबाब
बिराजसँग के छैन ?
आर्यनको रेट ६ लाख
पन्ध्र थिएटरमा होल्डओभर
'पलपलमा' का कमजोरीहरूको हाईलाईटस्
समिक्षा : पलपलमा
महङ्गो फिल्मी गीत !
१८ औं चलचित्रको निर्देशनमा शिब रेग्मी
प्रेम नपाउनेको पीडा
सलमान खानको फिल्मलाई पछार्यो 'पलपलमा' ले
अष्टनारायणमा 'दीपशिखा' को रेकर्ड
जवान हिरो : पुराना हिरोइन
"दीपशिखा" टालाटुली बाटुली
एडल्ट फिल्मका बालदर्शक
तीजको उपहार 'सिन्दुर' र 'दीपशिखा'
हृयाप्पी बर्थडे जीवन
प्रिमियरमा प्रेमिकासंग निरज
रेखा गाउँ फर्किन्
फोन उठाउने फुर्सद छैन दिपकलाई
रेखालाई पोखरामा र्‍याक
माल्भिका अब टेलिफिल्ममा
धडकन बढ्यो अरूणिमाको
ऋचाको मुखमा बुझो
उकेश छन् बेखुशि
मलेसियामा 'गजलकार' बाबु
चारलाई कलेक्सनको चुनौती
आर्यनको क्याप रहस्य
सबिरलाई रात प्यारो
निरुता पुनः मुम्बइ !
टाइटल एउटै : फिल्म दुइटा
एकै दिनबाट चार फिल्म
सात्तो गयो अरूणिमाको
मिस यू को सामाग्री चोरी
८ करोडको चलचित्र 'गौतम बुद्ध'
हिरो उड्न पाएनन्
बिराजलाई पारसको धाप
नन्दिता भन्ने कि शोभा ?
ग्रेटरनेपाल २ को स्क्रिप्ट चोरियो
छोडी गएलाई सात, दासढुंगालाई चार
आर्यन सिग्देल (जम्का भेट)
जय शम्भो, नाफा कम भो
किन हेर्ने नेपाली फिल्म ?
'नाइ नभन्नु ल' र 'कुसुमे रूमाल' को दौड शुरू
दुई हिरोइन दुईतिर
'दासढुंगा'को विशिष्ठ प्रीमियर
ब्यापार डेढ करोड तर हात लाग्यो सुन्ना
रेश जी ! लुगामा ध्यान पुर्‍याउने कि ?
दोहोरो भूमिकामा श्रीकृष्ण !
प्रधानमन्त्रीले 'दासढुंगा' हेर्ने
काममा फर्किइन् मनिषा
आइटम डान्समा रोक
बढ्दैछ नरेशको अनुहारमा चमक